सामाजिक सञ्जालको नशा चुरोट वा रक्सीको भन्दा पनि खतरनाक हुन्छ । एकपटक यो नशा लागेपछि मानिसको रातको निन्द्रा हराउँछ र उनीहरु रातदिन त्यसैमा भुलेर बस्छन् । च्याटमा कुराकानी गर्दा उनीहरुलाई न त भोक प्यास लाग्छ न त अरु काममा मन लाग्छ ।सामाजिक सञ्जालमा धेरैबेर झुण्डिने मानिसहरुमा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो साथीभाइले...
मोबाइलले धेरै लामो समय ब्याट्री टिकाउँदैन । मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि भने ब्याट्री सकिने चिन्ता भइरहन्छ । मोबाइलको ब्याट्री बढाउन यस्ता खालका उपाय अपनाउन सकिन्छ – १. यदि तपाई गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने कारको ड्यासबोर्डमा नराख्नुस् । साथै फोनलाई पनि सनलाइट पनि कम गरिराख्नुस् । किनकि गर्मीले पनि ब्याट्रीको आयुलाई कम...
धेरै मानिसहरु अक्सर राति सुतेपछि लामो समयसम्म पनि स्मार्टफोन चलाउने गरेका छन् । यद्यपि यसले मानिसको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने गर्छ । सुतेपछि लामो समयसम्म स्मार्टफोनको प्रयोग गर्नाने निम्न समस्याहरु देखिन सक्छ– १. आँखा कमजोर हुनु राति स्मार्टफोन चलाउँदा मानिसको आँखामा नकारात्मक असर पर्नजान्छ । रातिको...
। एक रिपोर्ट अनुसार आगामी ४० वर्षभित्रमा जिवित भन्दा मृतक फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या दोब्बर हुनेछ । एक तथ्यांक अनुसार फेसबुकमा ३ करोड अकाउन्ट यस्ता मानिसका छन् जसको मृत्यु भैसकेको छ । हरेक दिन ८ हजार फेसबुक प्रयोगकर्ताको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । अझ रोचक त के भने सन्...
सन् २०२० का लागि डिभी लोटरी खुलेको छ । अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२० का लागि डिभी लोटरी खोलिएको जानकारी दिएको हो । अमेरिकाको पूर्वीय समय अनुशार अक्टोबर ३ तारिख बुधबार दिउसो १२ बजेदेखि नोभेम्बर ६ बुधबार दिउसो १२ बजेसम्म डिभी लोटरीका लागि फारम भर्न सकिनेछ । डिभी लोटरीका...
होशियार ! फेसबुकमा समाचार शेयर गर्दा जागिर चट् भएपछि
2075 असोज ३ गते संविधान दिवसलाई प्रदेश २ मा कालो दिवसको रुपमा मनाइएको समाचारका लिंकहरु फेसबुकमा शेयर गरे वापत धनुषा जिल्ला अदालतमा खरिदार (डिठ्ठा) पदमा करारमा कार्यरत गुञ्जा रायलाई जागिरबाट हटाइएको छ । रायले असोज ३ गते विभिन्न ठाउँमा मनाइएको कालो दिवसका समाचार लिंकहरुलाई फेसबुकमा शेयर गरेकी थिइन् । जागिरबाट...
नेपाल टेलिकमले २०७५ असोज १ गतेदेखि ‘इन्ट्रानेट लिज’ सेवाको महसुल दर परिमार्जन गर्नुका साथै वाइम्याक्स सेवामा प्रवद्र्धनात्मक योजना लागू गर्ने भएको छ। ५१२ केबीपीएसको महसुल दर प्रतिमहिना रु एक हजार ६०० कायम गरिएको छ। त्यसैगरी एकदेखि १० एमबीपीएसको प्रतिएमबीपीएसको रु दुई हजार ७००, ११ देखि १०० एमबीपीएसको प्रतिएमबीपीएस रु दुई...
एप्पलले वर्ष सार्व गतजनिक गरिएको आइफोन एक्सभन्दा ठूलो स्क्रिन भएको आइफोन एक्सएस म्याक्स सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई अमेरिकी बजारमा ११०० डलर (करिब रु. १ लाख २६ हजार) पर्दछ। यसको मूल्य आइफोन एक्सभन्दा १०० डलर बढी छ। म्याक्स मोडेल आइफोन ८ प्लसकै हाराहारीको छ तर स्क्रीनको आकार...